Lamaody eran-tany: Ny anjara asan'ny Taiwan sy Sri Lanka amin'ny kolotsaina manerantany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Sri Lanka » Lamaody eran-tany: Ny anjara asan'ny Taiwan sy Sri Lanka amin'ny kolotsaina manerantany
Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! • Vaovao momba ny lamaody • Vaovao Mafana Sri Lanka • Vaovao Mafana Taiwan
Tamin'ny 6 Oktobra, nanangana tamin'ny fomba ofisialy ny "Fashion of Our Time" ny Taipei Fashion Week, fampirantiana izay mitarika mpijery hatramin'ny antsasaky ny fahatsiarovana lamaody an'i Taiwan amin'ny alàlan'ny seho an-tsehatra sy tantara an-tsary.
Ny Herinandron'ny lamaody Taipeh dia hanasongadinana ihany koa ny sangan'asa noforonin'ireo mpamorona Taiwaney fanta-daza, manolotra ny fiantraikan'ny vanim-potoana samihafa amin'ny indostrian'ny lamaody anatiny sy ny fomba fisehoan'ny lamaody any Taiwan nandritra ireo fotoana ireo. Notohanan'ny Minisiteran'ny Kolontsaina, ny fampirantiana ny Fashion of Our Time dia nanomboka tamin'ny taona 1950, izay vanim-potoana volamena tamin'ny indostrian'ny lamba Taiwan, hatramin'ny vanim-potoana maoderina.
Amin'ny alàlan'ny famoahana ireo sehatra manan-tantara, fampirantiana lamaody ary tsanganana misy famaritana, ireo mpijery dia hahafantatra tsara kokoa ny tantaran'ny indostrian'ny lamaody Taiwanese, ary koa ny tontolon'ny kolontsaina sy ny hatsarany.
"Ireo mpamorona lamaody amin'ny taranaka samy hafa, manoloana ny fanamby mandritra ny fotoana maro sy ny fitomboan'ny fifaninanana tsena iraisam-pirenena, dia mitazona hafanam-po tsy manam-petra amin'ny lamaody," hoy i Florence Lu, Mpanafaka ny Taiwan Fashion History.
Ny fizarana lohahevitra an'ny Fashion of Our Time dia manasa ireo mpampiranty hivezivezy amin'ny habakabaka sy ny fotoana hiverenana amin'ny vanim-potoana lamaody Taiwanese teo aloha. Manomboka amin'ny indostrian'ny lamba fehizoro tamin'ny taona 1950 ka hatramin'ny fanovana dizitaly ankehitriny amin'ny haino aman-jery lamaody, ny fampirantiana dia mampiseho ny fananan'ny mpamorona sy marika eo an-toerana ary manohy mampiasa lamaody hamaritana ny anjara asan'ny Taiwan amin'ny kolontsaina manerantany.
Ary koa ny fanombohana ny fampirantiana ny Fashion of Our Time, ny Taipei Fashion Week dia nanao ihany koa ny hetsika faha-35 taonan'ny Taiwan Fashion Design Awards izay natolotry ny Birao Fampiroboroboana ny Indostria, Minisiteran'ny Raharaha Toekarena tamin'ny 6 Oktobra.
Avy amin'ny mpandray anjara efa ho 450 avy amin'ny firenena 18 manerana an'i Eropa, Amerika ary Azia, rookie lamaody 12 no nasongadina tamin'ny seho fampisehoana mavitrika tamin'ilay hetsika.
Ny loka voalohany dia an'i Gajadeera sy Ruwanthi Pavithra avy any Sri Lanka tamin'ny sanganasan'izy ireo "Asa tanana / lamba ary lamba nentim-paharazana maharitra". Ny loka faharoa dia an'i Yeh, ny sanganasan'i Yu-Hsien “Mirage” ary i Chen, ny an'i Ching-Lin “Aiza no nalehan'ny voninkazo rehetra.” Taipei Fashion Week dia manomboka manomboka izao hatramin'ny alahady 17 oktobra.